ကောင်းကင်တမန်များကမ္ဘာ - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင်၏ဆွစ်ဇာလန်ဘုရားကျောင်း
ဆောင်းပါး > ဝိညာဉ်တော်သည်ကမ္ဘာတွင် > ကောင်းကင်တမန်များလောကီသားတို့သည်
ကောင်းကင်တမန်များသည်နာမ်ဝိညာဉ်သတ္တဝါများ၊ ကောင်းကင်တမန်များနှင့်ဘုရားသခင်၏ကျေးကျွန်များဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ယေရှု၏ဘဝတွင်အရေးကြီးသောအဖြစ်အပျက်လေးခုတွင်ထူးခြားသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ပြီးအခြားအကြောင်းအရာများကိုသင်ကြားစဉ်အခါသမယတွင်ယေရှုသူတို့ကိုရည်ညွှန်းခဲ့သည်။
ဧဝံဂေလိတရားဇာတ်လမ်းတွင်၊ ကောင်းကင်တမန်များသည် ယေရှုရှေ့တော်၌ စင်မြင့်ပေါ်သို့ ဝင်ရောက်ကြသည်။ ဂါဗြေလသည် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုရမည်ဟု ကြေငြာရန် ဇာခရိအား ဂါဗြေလထံ ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ (လုကာ၊ 1,1၁-၁၉)။ ဂါဗြေလသည်လည်း သားတစ်ယောက်ရမည်ဟု မာရိအား ပြောခဲ့သည် (း၂၆-၃၈)။ ယောသပ်အား အိပ်မက်ထဲတွင် ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးက ပြောပြခဲ့သည် (မဿဲ 1,20-24) ။
ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည် သိုးထိန်းများထံ ယေရှုဖွားမြင်ကြောင်း ကြေညာပြီး ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်က ဘုရားသခင်အား ချီးမွမ်းခဲ့သည် (လုကာ၊ 2,9စာ-၁၅)။ အဲဂုတ္တုပြည်ကို ပြေးပြီး နောက်တဖန် ပြန်လာဖို့ ဘေးကင်းတဲ့အခါ ယောသပ်ကို အိပ်မက်ထဲမှာ တခြားကောင်းကင်တမန် ပေါ်လာတယ်။ (မဿဲ၊ 2,13.19) ။
သခင်ယေရှု၏သွေးဆောင်မှုတွင် ကောင်းကင်တမန်များကို ထပ်မံဖော်ပြခြင်းခံရသည်။ စာတန်သည် ကောင်းကင်တမန်များ၏ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာကျမ်းချက်တစ်စောင်ကို ကိုးကားပြီး စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းပြီးဆုံးပြီးနောက် ယေရှုအား ကောင်းကင်တမန်များက လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် (မဿဲ၊ 4,6.၁၁)။ ပြင်းထန်သောသွေးဆောင်မှုအတွင်း ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည် ယေရှုအား ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တွင် ကူညီပေးခဲ့သည် (လုကာ ၂ ကော၊2,43).
ဧဝံဂေလိတရားလေးပါးက ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြသကဲ့သို့ ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင် ကောင်းကင်တမန်များသည် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည် ကျောက်တုံးကိုလှိမ့်ကာ ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ကြောင်း အမျိုးသမီးတို့အား ပြောပြသည် (မဿဲ ၂8,2စာ-၅)။ မိန်းမတို့သည် သင်္ချိုင်းတွင်း၌ ကောင်းကင်တမန် သို့မဟုတ် နှစ်ယောက်ကို မြင်သည် (မာကု ၁ ကော6,5; လုကာ ၂4,4.၂၃; ယော ၂၀:၁၁)။
ပြန်လာသောအခါ ကောင်းကင်တမန်များသည် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ပြန်လာသောအခါ ကောင်းကင်တမန်များနှင့်အတူ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန် ရွေးကောက်ခံရသူများနှင့် မတရားသောသူတို့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့ ပို့ဆောင်လိမ့်မည် (မဿဲ ၁။3,39-49; ၂၈.၃4,31).
သခင်ယေရှုသည် ကောင်းကင်တမန်အသိုက်အဝန်းများကို ဆင့်ခေါ်နိုင်သော်လည်း မတောင်းဆိုခဲ့ပေ။ (မဿဲ ၂6,5၃)။ သူပြန်လာတဲ့အခါ မင်းလိုက်သွားလိမ့်မယ်။ ကောင်းကင်တမန်များသည် တရားစီရင်ခြင်းတွင် ပါဝင်လိမ့်မည် (လုကာ ၁ ကော2,8စာ-၉)။ ဤအချိန်သည် ကောင်းကင်တမန်များ “လူသား၏အပေါ်၌ တက်ဆင်းကြ” သည်ကို လူတို့မြင်ရမည့်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည် (ယောဟန်၊ 1,51).
ကောင်းကင်တမန်များသည် လူကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဂုဏ်အသရေဖြင့် ပေါ်လာနိုင်သည်။ (လု 2,9; 24,4) သူတို့သည် မသေဘဲ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းမပြုကြဘဲ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲ သားပေါက်မပေါက်ကြောင်း ထင်ရှားသည် (လုကာ ၂၀း၃၅-၃၆)။ ကောင်းကင်တမန်တွေကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို လူတွေက တစ်ခါတရံ ယုံကြည်ကြတယ်။ (ယော 5,4; 12,29).
သခင်ယေရှုက “ငါ့ကိုယုံကြည်သော ဤသူငယ်” တို့ကို အုပ်စိုးရန် ကောင်းကင်တမန်များ ရှိသည် (မဿဲ ၁။8,6.၁၀)။ ကောင်းကင်တမန်များသည် လူတို့သည် ဘုရားသခင်ထံ လှည့်လာသောအခါ ဝမ်းမြောက်ကြပြီး ကောင်းကင်တမန်များက သေဆုံးသွားသော ဖြောင့်မတ်သူများကို ပရဒိသုဘုံသို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည် (လုကာ ၁ ကော၊5,10; 16,22).